Umjikelezo | May 2022
Main > Umjikelezo
Ngiwuphula kanjani umjikelezo wami wokuphuza? Ngakho-ke ngiyeka kanjani ukuphuza uma ngifika ekhaya? Thola isidingo. Kunamasu ambalwa esiwancomayo kumalungu ethu azama ukugqashula lo mkhuba. Ngisusa utshwala. Ukuthola omunye umsebenzi. Ungesabi ukucela ukwesekwa. Yiba nesihawu ngawe.6. 2018.
amazwe aphela kumjikelezo kaJohn o groats
Amazwe aphela kujohn o groats cycle - izixazululo eziqinile
Kuthatha isikhathi esingakanani ukujikeleza ukusuka ku-Lands End kuya kuJohn O Groats? Izinsuku eziyi-10 kuya kwezingu-14
umjikelezo wokuduma kwezulu
Umjikelezo wokuduma - sesha izixazululo
Yiziphi izinhlobo ezi-4 zokuduma kwezulu? Kunezinhlobo ezine zokuduma kwezulu: iseli elilodwa, iqoqo lamaseli amaningi, imigqa yamaseli amaningi kanye namaseli amakhulu.
umjikelezo we-peloton ceo
I-Peloton cycle ceo - izixazululo zokuthola
Ngithinta kanjani umphathi we-Peloton? Impendulo 1: Inombolo yocingo yePeloton Cycle ingu (646) 277-4497. Umbuzo 2: Ngubani umphathi omkhulu wePeloton Cycle? Impendulo 2: Isikhulu esiphezulu sePeloton Cycle nguJohn Foley.
izigqoko zokujikeleza ngokwezifiso
Izigqoko zokujikeleza ngokwezifiso - izixazululo ze-pragmatic
Ngabe umthetho ukugqoka isigqoko sokuzivikela e-UK? Awukho umthetho waseBrithani ophoqa abagibeli bamabhayisikili, banoma yibuphi ubudala, ukuthi bagqoke izigqoko zokuzivikela lapho behamba ngebhayisikili, noma ngabe i-Highway Code iphakamisa ukuthi abagibeli bamabhayisikili kufanele bagqoke isigqoko sokuzivikela esivumelana nemithetho yamanje, ngosayizi ofanele futhi oboshwe ngokuphepha.
umzila womjikelezo 66
Umzila webhayisikili 66 - izixazululo ezisebenzayo
Kungathatha isikhathi esingakanani kuCycle Route 66? cishe izinsuku ezingama-32
umjikelezo we-hyde park
Umjikelezo weHyde park - ungakufinyelela kanjani
Ungakwazi ukuhamba ngebhayisikili eHyde Park? IHyde Park Ubungani obuhle kunabo bonke amapaki aseCentral London, iHyde Park inezindawo ezimbalwa lapho kwamukelwa khona ukuhamba ngebhayisikili. Ukuhamba ngebhayisikili kuvunyelwe ku-Broad Walk, Palace Walk naseMount Walk. IGreen Park Cycling ivunyelwe kuphela eConstitution Hill, okuwumgwaqo ohamba eceleni kwepaki.
inethiwekhi yomjikelezo kazwelonke
Inethiwekhi yomjikelezo kaZwelonke - Imanuwali Ephelele
Ungakwazi ukuhamba emizileni yomjikelezo kazwelonke? Siyajabula ukumemezela ukuthi izindlela zokuhamba nokuhamba ngamabhayisikili kuNational Cycle Network manje sezizotholakala ebalazweni elisemthethweni le-Ordnance Survey. Ngo-2017, bekunohambo lokuhamba ngezinyawo ezingama-410 million nohambo lwamabhayisikili oluyizigidi ezingama-377 kuNethiwekhi. 2019.
uhlelo lokusebenza lomjikelezo wokulala we-android
Uhlelo lokusebenza lomjikelezo wokulala we-android - izixazululo eziqinile
Yiluphi uhlelo lokusebenza lokulala oluhamba phambili lwe-Android? Izinhlelo Zokulala ezi-7 ezihamba phambili zokuvuka Uhlelo lokusebenza lwe-Android. Umjikelezo Wokulala - Iwashi le-Smart Alarm. Uhlelo lokusebenza lwe-iPhone ne-Android. Relax Melodies - Imisindo Yokulala. Uhlelo lokusebenza lwe-iPhone ne-Android. Amandla Omjikelezo Wokulala. Uhlelo lokusebenza lwe-iPhone. I-Pzizz - Ukulala, Ukuphumula, Ukugxila. I-White Noise Lite. Relax & Ulale Kahle - I-Hypnosis Nokuzindla. Ukulala.
Umjikelezo webhati - izimpendulo nemibuzo ejwayelekile
Ungakwazi ukuhamba ngebhayisikili eBath? Uma uthanda ukuhlola ngamasondo amabili, uBath muhle kakhulu ngebhayisikili. Abazali bangakhululeka njengoba iBath inemizila eminingi yemijikelezo engenazimoto, okuvumela wena nomndeni ukuthi nigxile kokubonwayo okungokomlando kanye nezilwane zasendle ongahlangabezana nazo.
Umjikelezo ka-Arnold - imibuzo nezimpendulo ezibalwe kuhlu
Hlobo luni lwe-steroids oluthathwe ngu-Arnold? Bathi uSchwarzenegger wabatshela ukuthi waqala ukuthatha uDianabol, i-steroid ethandwayo, eneminyaka engu-17 eJalimane futhi wajova njalo ezinye izinto ezifana ne-testosterone ngemuva kokufika eMelika ngo-1968.
Sean kelly umjikelezo
Sean kelly cycle - umhlahlandlela wokugcina
Uneminyaka emingaki uSean Kelly ohamba ngebhayisikili? /
umjikelezo omuhle kakhulu ongaphezu kwama-40
Umjikelezo omuhle kakhulu ongaphezu kwama-40 - indlela yokubhekana
Ngabe ukuhamba ngebhayisikili kukulungele ngaphezulu kwama-40? Uma ufuna inketho yokusebenza ngokomzimba ukusiza ukushisa ama-calories nokunciphisa ubungozi bezifo ezingamahlalakhona zendlela yokuphila, ukuhamba ngebhayisikili kungaba kwakho. Lo mdlalo ungasiza ukugcina impilo enhle yenhliziyo, njengoba kukhuphula izinga lokushaya kwenhliziyo yakho, kepha kulula emadolweni kunokugijima.
umjikelezo wokulutha ushukela
Umjikelezo wokulutha ushukela - izimpendulo ezilula zemibuzo
Kuthatha isikhathi esingakanani ukugqashula umlutha kashukela? Abaningi bethu bazophuza ngokweqile ngezikhathi ezithile. Kepha uma sidla ushukela omningi, sifuna kakhulu, kusho uMark Hyman, MD. Kodwa-ke, izindaba ezinhle ukuthi abantu bangakwazi ukugqashula ukulutha ushukela ezinsukwini eziyi-10.
Kungathatha isikhathi esingakanani ukujikeleza umhlaba wonke? Kungathatha isikhathi esingakanani ukuvakasha ngebhayisikili emhlabeni wonke? Uhambo oluncane lwebhayisikili emhlabeni jikelele lungakuthatha iminyaka eyi-1.5 kuye kwemibili. Kepha kungancika kokuhlukahluka okuningi. Ijubane elijwayelekile ongalilindela ukuhamba ngebhayisikili lokulayisha eligcwele ligcwele liphakathi kuka-10 kuye ku-20 km / h (isilinganiso esingu-15 km / h noma amamayela ayi-9.3 ngehora) .14 2019.
lyme umjikelezo ovaliwe
I-Lyme die off cycle - uxazulula kanjani
Ufa isikhathi esingakanani uLyme? Le nqubo yokususa noma yokuqeda amandla emzimbeni yaziwa kakhulu ngokuthi yi-detox eneziguli zeLyme. Ukuqala kwe-herme yeLyme ngokuvamile amahora angama-48-72 ngemuva kokuqala ama-antibiotic futhi kungahlala amasonto, ngokungafani ne-syphilis, eqala kungakapheli amahora futhi ivame ukuqedwa kungakapheli izinsuku.31. 2017.
umjikelezo wempilo yabanikeli
Umjikelezo wempilo yabanikeli - izixazululo ezisebenzayo
Uyini umjikelezo wokuphila wabanikeli? Isikhathi sokuphila sabanikeli sichaza indlela izinhlangano ezingenzi nzuzo ezihlanganyela ngayo futhi zibuke ngayo abanikeli bazo kusukela ekuqaleni kobudlelwano bazo (lapho ziqala ukufunda ngenhlangano yakho) kuze kube yilapho zinikela noma ngaphezulu. Izigaba ezintathu ze-Donor Lifecycle yi-Acquisition, Retention, ne-Upgrade.
igiya elisha lomjikelezo
Igiya elisha lomjikelezo - indlela yokubhekana nayo
Ungakwazi ukufaka amagiya amasha ngebhayisikili? Impendulo ngu-yebo ofanelekayo. Kunezindlela ezahlukahlukene zokufaka amagiya alula kubhayisikili lakho, kepha akuyona njalo indaba yokushintshanisa amagiya kuphela. Ngokuya ngohlobo lwezinto osuvele unazo, nokuhambisana kwalezo zingxenye, kungadingeka ukuthi ushintshe ezinye zezinto ezithile. 2012.
umjikelezo wesikhathi omuhle
Isikhathi esihle - izimpendulo ezinkingeni
Ngisiphi isikhathi esihle sokuhamba ngebhayisikili? Noma ngabe ugibele wedwa noma ugibele iqembu, ukuhamba ngebhayisikili kuyajabulisa futhi kungaqala noma kunini kosuku noma ngabe usuku lwasekuseni, ntambama (uma ungakwazi ukugibela ngaphansi kwelanga elishisayo!), Kusihlwa (ngemuva komsebenzi) naphakathi kwamabili (ubusuku bokushintsha).
imali engenayo yomjikelezo we-peloton
Imali engenayo yomjikelezo wePeloton - indlela yokubhekana nayo
Ngabe i-peloton ithole inzuzo? Ngalesi sikhathi samanje, imali engenayo yesibikezelo sePeloton engu- $ 1.1 billion. 31, imali engenayo ikhule ngo-128% kusuka onyakeni owedlule kuya ku- $ 1.06 billion, okokuqala ukuthengisa njalo ngekota kudlule u- $ 1 billion. Abahlaziyi bebefuna ama- $ 1.03 billion. Imali engenayo iyizigidi ezingama- $ 63.6, noma amasenti ayi-18 isabelo, kusuka ekulahlekelweni kwezigidi ezingama- $ 55.4 ngonyaka owedlule.